काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेका दुई बिमा कम्पनीको सेयरमूल्य सोमबार समायोजन गरेको छ। चुक्तापुँजी १ अर्ब पुर्याउन १०ः६ अर्थात ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेका प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य नेप्सेले समायोजन गरेको हो। समायोजनपछि...
हिमालयन बैंक, डिप्रोक्स र नागबेली लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बोनस सेयरका लागि एक बैंक र दुई लघुवित्तको सेयरमूल्य सोमबार समायोजन गरेको छ । नेप्सेले हिमालयन बैंक, डिप्रोक्स लघुवित्त र नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि हिमालयन बैंकले १० प्रतिशत, डिप्रोक्स लघुवित्तले ३० प्रतिशत र नागबेली...
काठमाण्डौ । गत वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयरमूल्य शुक्रबार समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित ५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । समायोजित मूल्यअनुसार प्रभु इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता सेयर ४००.९५...
समायोजनपछि एनसीसी बैंकको सेयरमूल्य रु. २०२.६१ कायम
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित १५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकको सेयरमूल्य समायोजन भएर प्रतिकित्ता २०२.६१ रुपैयाँ कायम भएको छ । समायोजन हुनुअघि सोमबारको कारोबारमा यो बैंकको अन्तिम बिक्रीमूल्य प्रतिकित्ता २३३ रुपैयाँ रहेको थियो । बैंकको वार्षिक साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि...
सिर्जना फाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । बोनस सेयरका लागि सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ । नेप्सेले गत आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना फाइनान्सले प्रस्ताव गरेको १५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजित मूल्यअनुसार सिर्जना फाइनान्सको सेयर प्रतिकित्ता २०५.२२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अब यही नयाँ समायोजित मूल्यअनुसार यो...
बोनस सेयरका लागि स्वाभिमान लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले २४ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको स्वाभिमान लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ९४९.१९ रुपैयाँ कायम गरेको छ । अब समायोजित...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बुधबार गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि लुम्बिनी विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । लुम्बिनी विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको ५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै लुम्बिनी विकास बैंकको प्रतिकित्ता १९४.२९...
समता लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले ५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि समता लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । समायोजनपछि समताको प्रतिकित्ता सेयर ५१०.४८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अब समायोजित मूल्यअनुसार नै...
साना किसान, महुली र सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति कायम ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षका लागि बोनस सेयर प्रस्ताव गरेका तीनवटा लघुवित्तका सेयरमूल्य सोमबार समायोजन गरेको छ । नेप्सेले साना किसान विकास लघुवित्त, महुली लघुवित्त र सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार साना किसानको प्रतिकित्ता ७८४.२८...
दुई बैंक र दुई फाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन, कुन–कुन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दुई बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीको सेयरमूल्य सोमबार समायोजन गरेको छ । नेप्सेले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक, युनाइटेड फाइनान्स र जानकी फाइनानस लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता नेपाल इन्भेस्टमेन्ट...
विजय र नेरुडे लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, कतिमा खुल्दैछ कारोबार ?
काठमाण्डौ । समान बोनस सेयर प्रस्ताव गरेका विजय लघुवित्त र नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सेयरमूल्यमा आइतबार समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले समान १५/१५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेका दुवै लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजित मूल्यअनुसार विजय लघुवित्तको प्रतिकित्ता ६२३.४८ रुपैयाँ र...
नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बोनस सेयरका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडको सेयरमूल्य आइतबार समायोजन गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि दुवै बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले १५ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि नेपाल बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २७५.६५...